Rufu rweRussia COVID-10 munaGunyana rwakapetwa kaviri nhamba yehurumende yepamutemo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Russia Kuputsa Nhau » Rufu rweRussia COVID-10 munaGunyana rwakapetwa kaviri nhamba yehurumende yepamutemo
Rufu rweRussia COVID-10 munaGunyana rwakapetwa kaviri nhamba yehurumende yepamutemo.
Hurumende yeRussia iri kupomerwa mhosva yekudzikisira mhedzisiro yeCOVID-19 denda munyika.
Kufa kweRussia COVID-19 tally kunoda kusvika mazana mana nemakumi mashanu, epamusoro-soro muEurope izvozvi.
Kunyangwe zvikumbiro kubva kuna Putin uye kuwanikwa kwakakura kwejekiseni rekumusha, makumi matatu nembiri chete muzana evaRussia vanobaiwa zvizere.
Moscow yakavhara masevhisi asina kukosha kwemazuva gumi nerimwe nemusi weChina sezvo nyika ichirwisa rekodhi-inotyora hutachiona hwekuvhiya.
44,265 vanhu vakafa neCCIDID-19 muRussia munaGunyana, sekureva Rosstat (Federal Statistics Agency).
Huwandu hwacho huchiri kushomeka parekodhi yepamwedzi yeRussia yevanhu vanopfuura zviuru makumi mashanu vakafa nemakona muna Chikunguru, asi zvakada kupeta kaviri fungidziro yehurumende yeRussia.
Hurumende yepamutemo yakataura kuti Russia yakaona kufa makumi maviri nemana munaGunyana.
Huwandu hutsva hunounza huwandu hwekufa kwekoronavirus muRussia kusvika vangangoita mazana mana nemakumi mashanu, nhamba yepamusoro muEurope.
Hurumende yeRussia ichipomerwa mhosva yekudzikisira mhedzisiro yedenda reCCIDID-19 munyika uye chimiro chaRosstat - chakaburitswa mukupera kweChishanu - yakapenda mufananidzo wakasviba zvakanyanya kupfuura unoratidzwa nevakuru.
Huwandu hwehurumende yeRussian hurumende inongofunga nezvekufa uko hutachiona hwakagadzwa sechikonzero chikuru chekufa mushure mekuvhiyiwa.
Rosstat, zvisinei, inoburitsa nhamba pasi petsanangudzo yakafararira yekufa kwakabatana nehutachiona.
Russia ndiyo nyika yakanyanya kuoma muEurope nedenda iri, nezviremera zvichinetsekana kurwisa manzwiro akapararira ekurwisa vaccine.
Kunyangwe zvikumbiro kubva kuMutungamiriri weRussia Putin uye kuwanikwa kwakawanda kwemajabs epamba, 32% chete yevaRussia vanobaiwa zvizere.
Moscow yakavhara masevhisi asina kukosha kwemazuva gumi nerimwe nemusi weChina sezvo nyika iri kurwisa rekodhi-inopwanya hutachiona hwekuvhiya, hunotungamirwa nehuwandu hwekudzivirira.
Russia yakanyora 1,163 COVID-19 kufa nezuro.